ဒိန်ခဲ - မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်ထုတ်ကုန်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ယင်း၏မျိုးကွဲအစားအသောက်များတွင်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ဒိန်ခဲထဲမှာကယ်လိုရီပမာဏကိုင်း၏အဆီအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်နေသောကြောင့်အခြားသူများအစာအိမ်အဘို့လည်းမိုးသည်းထန်စွာများမှာအချို့သောမျိုးစိတ်အလွန်အသုံးဝင်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပြီး, ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်နည်းလမ်း၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ။ သင်ဤနို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သင်သည်သင်၏စားပွဲပေါ်မှာအဘို့အပါဆုံးသည်သင့်လျော်သည်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်း၏ဒိန်ခဲအတွက်မည်မျှကယ်လိုရီထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
: ဒိန်ခဲသုံးအဓိကအမျိုးအစားသို့ကွဲပြား ခက် (ဥပမာ, ဒတျချြ, Parmesan), တစ်ဦး Semi-အစိုင်အခဲ (စသည်တို့ကိုရုရှား, ISDA, Altai အဘိဓါန်,), ပျော့ပျောင်းသော (ထိုကဲ့သို့သော mozzarella အဖြစ် texture နှင့်အတူထောပတ်ဒိန်ခဲ,) ။ စည်းကမ်းအတိုင်း, Post-ဆိုဗီယက်အာကာသအတွင်းလူကြိုက်အများဆုံး Semi-ခက်ဒိန်ခဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အခြားရွေးချယ်စရာများအားလုံးမကြာခဏအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပါတယ်။
အချို့သောလူကြိုက်များဒိန်ခဲ၏ကယ်လိုရီ content တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ:
ဒတ်ခ်ျဒိန်ခဲ - semisolid, အနံ့နှင့် 28% ထက်မပိုတဲ့ပြည့်နှက်အဆီအကြောင်းအရာအားဖြင့်၎င်း, ယင်း၏ကယ်လိုရီ - 100 ဂရမ်နှုန်း 352 kcal;
Cheddar - ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဒိန်ခဲတစ်ဦး; ယင်း၏၏ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကို 392 kcal, 23 ဂရမ်ပရိုတိန်းနှင့် 32 ဂရမ်အဆီအရာမူကား,
ရုရှားဒိန်ခဲ - သာယာသောအရသာများနှင့်အများအပြားနှင့်အတူအနှစ်သက်ဆုံးသောကြောင့်ပရိုတိန်းတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်နှင့်အတော်လေးအနိမ့်ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကိုတစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည် - 100 ဂရမ်နှုန်း 360 kcal;
Muenster (နှင့် livarot ဒိန်ခဲ, romadur နှင့် tilzer Limburgish အဘိဓါန်) - အနိမ့်အဆီအကြောင်းအရာနှင့်ပြင်သစ်ဒိန်ခဲ - 29 ဂရမ်, ယင်း၏ကယ်လိုရီအကြောင်းအရာထုတ်ကုန်၏ 100g နှုန်း 365 kcal ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ - မကြာခဏစားသုံးသူ၏စားပွဲပေါ်တွင်ပေါ်လာသောသူတို့ဒိန်ခဲ။ သူတို့ကအသားညှပ်ပေါင်နှင့် casseroles နှင့်သုပ်အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဒိန်ခဲအလေးချိန်ဆုံးမခြင်းများအတွက်အစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းရန်ကန့်သတ်ထားစေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နှစ်ယောက်ကယ်လိုရီဒိန်ခဲ suluguni သနည်း
ဒိန်ခဲ၏ဤမျိုး - အပျော့ပါကဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ပျော့ပျောင်းသော creamy အရသာ curdled သိရသည်။ 100 ဂရမ်နှုန်းကြောင့်ထိုသို့ပြုရုံ 285 ကယ်လိုရီဒီ option, အစားအသောက်များတွင်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဖွဲ့စည်းပုံပရိုတိန်း၏ 19.5 ဂရမ်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်အဆီအကြောင်းအရာနှင့်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ထုတ်ကုန်ချိန်ခွင်လျှာ၏ညွှန်ပြသောအရာ 22 ဂရမ်ဆီဥ, ပါဝင်သည်။
အဲဒီမှာမှိုနှင့်အတူဒိန်ခဲ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူကြိုက်များရရှိခဲ့, ၎င်းတို့အားလုံးကို။ အလွန်အကျွံ 28 ဂရမ်ပရိုတိန်း, - - ငါတို့သည်ဤကဲ့သို့သော Roquefort အဖြစ်အပြာဒိန်ခဲ၏ဂန္ဗားရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အဆီပမာဏကြီးမားတဲ့ဖော်ပြခြင်းမမဖြစ်နိုင်ဘူး 21 ဂရမ်, ဒါပေမယ့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်လည်းရှိပါတယ် - 2,34 စုစုပေါင်းကယ်လိုရီဒိန်ခဲ - 353 ကယ်လိုရီ။ ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ပမာဏအတွက်တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာကိုသုံးပါ။
ဤသူကားအ - ကြော့ရှင်းနှင့်ဂျာမန်သခင်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောစပ်အပြာရောင်ဒိန်ခဲ, ဆဲကသူ၏စာရွက်လျှို့ဝှက်ထားကြသည်။ 354 kcal စုစုပေါင်းစွမ်းအင်တန်ဖိုးကိုပေးသော 21 ဂရမ်ပရိုတိန်းနဲ့ 30 ဂရမ်ဆီဥ, များအတွက် 100 ဂရမ်။ အစားအသောက်များတွင်အဘို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပေမယ့်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအတော်များများကယ်လိုရီ Parmesan ဒိန်ခဲသနည်း
အများစုမှာခက်ဒိန်ခဲ - က parmesan ။ သင်သည်သင်၏စားပွဲပေါ်မှာရမီ, ဒီဒိန်ခဲ 12-36 အဘို့အရင့်ကျက် ကဆန္ဒရှိကိုက်ညီမှုရောက်ရှိလကြာမီ။ ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. ဒီဒိန်ခဲကို 100 ဂရမ်နှုန်း 380 390 မှ kcal တစ်ဦးအတွက်ကယ်လိုရီတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုကိုအခြားအမျိုးပေါင်းရည်ညွှန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အလွန်ကန့်သတ်အရေအတွက်အတွက်အသုံးပြုသည် သာ. ကောင်း၏စဉ်အတွင်း၎င်းသည်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးဓါတ်ထုတ်ကုန်ဒီဖုန်းဆက်ဖို့ခက်ခဲသည်။
ဒီအပျော့, နူးညံ့သိမ်မွေ့, အံ့သြဖွယ်အရသာရှိတဲ့ဒိန်ခဲကိုမကြာခဏအရသာအချိုပွဲ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ - 41,5 ဂရမ်တစ်ခုပမာဏကို 4.8 ဂရမ်အတွင်းရှိအရာကနေပရိုတိန်းနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ကုန်၏ 100 ဂရမ်နှုန်း 412 ယူနစ်, ဒါပေမဲ့အဆီ: ဒါကပဲမိမိမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင့်မားတဲ့ကယ်လိုရီပဲ! သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့ရည်မှန်းနေတယ်ဆိုရင်, ဒီထုတ်ကုန်သင်သည်အလွန်သူ့ကိုချစ်ကြလျှင်ပင်အစားအသောက်များတွင်မှဖယ်ထုတ်လိုက်ရပါမည်။
Dandelions ၏သုပ် - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
လူ့နျြးမာရေးအတှကျ 10 အရှိဆုံးအသုံးဝင်သောထုတ်ကုန်
လက်ဖက်ရည်စမုန်ဖြူ - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
ဘယ်အစားအစာက melatonin ဆံ့?
Soy အသား - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
Herring - ကယ်လိုရီ
ဘယ် melanin ပါရှိသည်?
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အပြေး - ဘယ်လောက်အများဆုံးသက်ရောက်မှုများအတွက် run ဖို့?
Beet kvass Slim
ပိုးမွှားများ၏ကြောက်လန့် - ထိုကဲ့သို့သောတို့၏အညစ်အကြေး-ကွောဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရသနည်း
ဘီယွန်းစနဲ့ Jay-Z နှင့်သူ၏သမီးသူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်မှာပျော်စရာခဲ့
Buenos Aires ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
အဘယ်ကြောင့် blackcurrant ၏အိပ်မက်?
ဤရွေ့ကား 20 "assholes" သင်ဘာသာစကားကိုပြပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘူး!
အခြိနျဆှဲ - သည်, ကစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ကျော်လွှားဖို့ဘယ်လို, ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်အမျိုးအစားများ?
ပလပ်စတစ်ပုလင်း၏ "ကြက်ဖ" Hack
Thoroughwax - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications